Barre Hiiraale & Ciidan uu wato oo tagay Kismaayo | Keydmedia
Barre Hiiraale & Ciidan uu wato oo tagay Kismaayo
Kismaayo (KON) - Col. Barre Aadan Shire (Barre Hiiraale), ayaa Maanta oo Sabti ah dib ugu laabtay Magaalada Kismaayo oo Mudo ka badan Sanad kahor Dagaal looga soo saaray.
Barre oo ay la socdeen Ciidamadiisa & Gaadiid Dagaal ayaa degay Garoonka Ma-dhamaato ee Magaalada Kismaayo, halkaasi oo uu kulamo Albaabada u xiranyihiin kula leeyahay Madaxda ka socota IGAD, DFS & Axmed Madoobe.
Ciidamada uu wato Barre Hiiraale ayaa ah kuwii kula sugnaa Deegaanka Goobweyn, Duleedka Kismaayo Mudadii Halka Sano ee lasoo dhaafay, waxaana Tallaabada ay ku yimaadeen Maanta Magaalada ka danbeeyay markii Wafdi ballaaran ay ugu tageen Deegaanka Goobweyn Khamiistii lasoo dhaafay.
Col. Barre Hiiraale ayaa lagu wadaa in Maalmaha soo socda ay kasoo qaado Magaalada Kismaayo, kadibna ay geyso Muqdisho, mana cadda in uu ka qeybgali doono Shirka 21-ka Bisha September ka furmaya Kismaayo.
Xaaladda Magaalada Kismaayo ayaa isku bedeshay mid kacsan markii uu Barre Hiiraale & Ciidan uu hogaaminayo tageen, iyadoo Maleeshiyada Axmed Madoobe heegan sare la geliyay Cabsi laga qabo inuu Dagaal dhexmaro Labada dhinac.